kenduru mubati Vagadziri & Vatengesi - China kenduru mubati Factory
Iyi girazi isina chinhu chekenduru chine makesi matatu kuitira kuti ugone kugadzira wakisi girazi rinonhuwirira kenduru.
Mudziyo wekenduru unogona kugadzirwa kune akati wandei mavara, unogona kusarudza iwe unofarira kara kubva kuPenone kadhi, uye isu tinogona kukupa meseji sevhisi yako.
Chinhu: A07M, A08M, A09M
Kukura: D8.2CM * H9.8CM / D9.2CM * H11CM / D10.2CM * H13.1CM
Anoshongedza 4OZ simbi gaba magaba ekugadzira makenduru
Nedenderedzwa muviri nesimbi zvivharo, iri kenduru tini zvirongo zvakakwanira kugadzira makenduru. Uye zvakare, iwo mashoma muhukuru uye akareruka uremu, saka inotakurika chaizvo kuti iwe utakure. Iwe unogona kudurura iyo wakisi wakisi mumakani aya, uye nekumisikidza matinji kumakenduru e DIY, izvo zvinonakidza.
Kukura: D7cm * H4.9cm
Ipa sosi sevhisi yekugadzira makenduru e DIY
Kukura: D6CM * H7CM
isu tiri kutarisira kuve yako yakareba kwenguva parterner muChina.
Reusable Anoshanduka-shanduka & Akawandisa - Bvisa magirazi emidziyo saizi inofanirwa kushandiswa segirazi nezvinonhuwira, mudziyo wemiriwo, midziyo yekumwaya, zvirongo zvekuchengetera, makenduru makenduru uye zvimwe zvipo zvekugadzira mini mudziyo usina mweya. Inoitwa kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekusimba uye nyore.
Kukura: D10cm * H13cm
Muvharo: yemishenjere muvharo kana emapuranga muvharo
chando matte girazi isina kenduru mubati-champagne / Girinhi
Ipa mharidzo sevhisi yekugadzira makenduru
Chinhu: A03M / A07M
Kukura: D7.2CM * H9.1CMM: D8.2CM * H9.8CM
Iyi igirazi regirazi remakenduru rakakwenenzverwa rine hukuru hutatu hwakasiyana. Sangana nezvido zvako zvekugona kwakasiyana. Iyo inozivikanwa kwazvo munyika zhinji uye inogona kushandiswa kugadzira makenduru uye kuchengeta chimwe chinhu. Isu tinoshandisa eco-inoshamwaridzika yemishenjere kuvandudza kuiswa chisimbiso uye kushandiswa.
Chinhu: A03P, A06P, A07P
Kukura: D7.2CM * H9.1CM, D11.2CM * H8.7CM, D8.2CM * H9.8CM
Ruvara: Nhema, gamuchirawo yakagadzirirwa ruvara
Chinhu: A06P / A07P / A08P / A09P
Kukura: D8CM * H8.1CM D9CM * H10CM D10.2CM * H12.5CM D11CM * H8CM
10oz Spray polish girazi kenduru chirongo nemishenjere chifukidzo-Bhuruu / Pepuru / Chena + Nhema
Yakasaswa nhema pagirazi, gamuchira yakaenzana nemabhodhi akasiyana, akadai seyakavharwa huni muvharo, yakavharidzirwa simbi chivharo.
Isu tinobvuma zvakavanzika chitaridzi uye sirika-yakadhindwa logo sekuda kwako. Saizi uye ruvara zvinogona zvese kugadzirwa, zvakanyatso gadzira DIY kenduru kugadzira.
Kukura: D8.2cm * H9.8cm
Uyezve, magirazi emakenduru egirazi anogona kuitwa mune akasiyana mhedzisiro, se matte, chando, yakakwenenzverwa, kupfira. Unogona kusarudza maitiro aunoda. Ehezve, kana iwe uchida kupurinda yako yega logo kana zvinyorwa pane iyo girazi mukombe, isu tinogona zvakare kuzviita. Iwe unongoda kuti utitumire zvigadzirwa zvako, tinogona kukupa iwe sereferensi.